Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny andiany faha-11 amin’ny dinikasa momba ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana eto anivon’i Afrika ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany maraina teny amin’ny CCI Ivato.
Ny fampivoarana ny toekarena aty amin’ny kaontinanta Afrikana no tanjon’izany dinikasa izany ary nokarakarain’ny Vondrona iombonan’ny firenena Afrikana ka notanterahina niaraka tamin’ny Vondrona iraisam-pirenena mampiasa ny teny Frantsay.
Nitondra fanazavàna momba ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika ny Praiminisitra ka nambarany fa tsapan’ireo firenena any ivelany ny ohatra tsara asehontsika eo amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharana entina hampivoarana ny toekarem-pirenena, ary antenaina hoy izy fa hahatongavana amina fanapahan-kevitra entina hametrahana fiovàna hanatsaràna izany toekarena izany ity dinikasa tanterahina eto Madagasikara ity, ka hahay hiara-miasa ny samy firenena Afrikana: “Afrika mamelona an’i Afrika, Afrika no mampitafy an’i Afrika, ary Afrika no mitondra fanantenana ho an’ny tanora Afrikana”. Araka izany, hoy ihany izy, dia ilaina ny fisokafan’ny firenena Afrikana tsirairay eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra, ary indrindra ny fifandraisan’ireo samy mpandraharaha mba hisian’ny fifamenoana ka hampatanjaka amin’ny ankapobeny ny toekarena eto an’ivon’i Afrika.
Ho fanatanterahana izany, mba hampivoarana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara, dia efa miomana amin’ny fametrahana ny “Zone d’aménagement industriel” isika amin’izao fotoana izao, hoy ny Praiminisitra. Tsy voatery hovaina anefa ny lalàna mifandraika amin’izany, fa misy kosa ireo antanan-tohatra maromaro tsy maintsy hizorana, hahafahana mandrafitra ireo rijan-teny ilaina mba hifanaraka amin’ny zavatra takian’ny filàna misy amin’izao fotoana izao.
Nanambara ny Praiminisitra fa maro ny fomba ahafahana mitrandraka an’izany fampivoarana ny toekarena izany, toy ny fampiasàna ny fitaovana ara-bola isan-karazany, izay azo lazaina fa efa miha-mivelatra; ny fifampizaràna traikefa sy fandrantoana fahalalàna, ary ho antsika eto Madagasikara manokana dia ilaina ny fiaraha-miasa amin’ny firenana hafa sy ny fitrandrahana ny fifanakaikezan’ny Nosintsika amin’ny Kaontinanta Afrikana mba hanafainganana ny fampandrosoana, nefa misy ihany koa ny lafiny harena an-kibon’ny tany sy ny fizahan-tany, ary ny vokatra vita eto amintsika, izay azontsika aroso ho azy ireo.